ဗီတာမင်B12 Folic နဲ့Acidပါဝင်တဲ့အားဆေးတွေသောက်ပေးပါ။ဦးနှောက်အတွင်းမှတ်ဥာဏ်ထက်သန်စေ
Elastinတွေ ထုတ်လုပ်ပေးဖို့Siliconသတ္ထုဓာတ်တွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။
Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 19:21
myatnoe 23 April 2008 at 23:26
စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါ။ အမြဲပြုံးရယ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
အနက်ရောင်သည် လူကို ပိုရင့်စေပါသည်။
BLACK DREAM 24 April 2008 at 01:43
cbox က ဘယ်မှာလဲဟင်?.. cbox မတွေ့တော့ ဒီမှာပဲ ပြောသွားတော့မယ်..ဟဲ..။ အသစ်တစ်ပုဒ်တင်ထားလို့ပါ ...။ တစ်စုံတစ်ခုသော ခံစားချက်ကို ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ် :)
HEARTMUSEUM 24 April 2008 at 02:45
ဟီး....ဟီး..... အဖွားကြီးက ကျန်တဲ့ အဒေါ်ကြီးတွေအတွက် လက်ချာရိုက်ထားတယ်ပေါ့လေ။
ဒေါ်ကြီး ရွှေပြည်ကို လက်တို့ပြီးပြောလိုက်မယ်.....
Tea 24 April 2008 at 03:56
i like that comment!! LOL
hay i don't know why.. i can only see part of your blog..
Layma 30 April 2008 at 21:20